Siyaasiyiin ka soo horjeestay in dib loo dhigo doorashada guud | Star FM
Home Wararka Kenya Siyaasiyiin ka soo horjeestay in dib loo dhigo doorashada guud
Siyaasiyiin ka soo horjeestay in dib loo dhigo doorashada guud
Siyaasiyiinta xulafada la ah madaxa xisbiga ODM Raila Odinga iyo ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in aynan marnaba suurtagal ahayn in la kordhiyo muddo xileedka Uhuru Kenyatta.
Tani ayaa imaanaysa iyadoo uu qorshuhu yahay in bisha sideedaad ee sanadka 2022-ka ay gudaha dalka ka dhacdo doorasho guud.
Xildhibaanka deegaanka bariga Suna ee ismaamulka Migori Junet Maxamad ayaa sheegay in codeynta aan xita hal maalin ah dib loo dhigi Karin.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii shakhsiyaad uu ka mid yahay xoghayaha guud ee dalladda ururrada shaqaalaha ee COTU Francis Atwoli ay soo jeediyeen in wax laga beddelo jadwalka doorashada ilaa iyo inta ay ka qabsoomayso aftida lagu beddelaya xeerarka wadanka.
Waxaa dareenka Atwoli mid la mid ah muujiyay mudanaha laga soo doortay deegaanka Lurambi ee ismaamulka Kakamega Titus Khamala.
Mr.Khamala ayaa sheegay in guddiga madaxa bannaan ee dooraashooyinka iyo xuduudada ee IEBC uu u muuqdo inuunan si buuxda ugu diyaar garoobin kala saaridda deegaan doorashooyinka sidaas awgeedna ay lagama maarmaan tahay in muddo dheeraad ah lagu kordhiyo xilligii horay loo qorsheeyay in la qabto doorashada guud.
Mudanaha laga soo doortay Garissa Township horayna u soo noqday hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Aadan Barre Ducaale ayaa dhankiisa sheegay in aan lagu guulaysan doonin xeelad kasta oo ku aaddan dib u dhigidda doorashada.
Previous articleCaqabado ku hor guduban shirka wadatashiga doorashooyinka Soomaaliya